Mpanamboatra fitaovana fanaka matihanina izahay hatramin'ny 1999.
Azafady alefaso aminay ny mailakao ny fividianana amin'ny alàlan'ny mailaka na fax, na azonao atao ny mangataka anay handefa anao Performa Invoice ho an'ny kaontinao. Tokony ho fantatray izao fampahalalana manaraka izao momba ny baikonao:
1) Fampahalalana momba ny vokatra: Quantity, famaritana (habe, fitaovana, loko, logo ary fividianana entana), Artwork na Sample no ho tsara indrindra.
2) Fotoana fandefasana ilaina.
3) Fampahalalana momba ny fandefasana: Anaran'ny orinasa, Adiresy, nomeraon-telefaona, seranan-tsambo / seranam-piaramanidina.
4) Ny antsipirian'ny fifandraisan'ny Forwarder raha misy any Shina.
3. Inona ny dingana rehetra amin'ny fanaovana raharaha miaraka amintsika?
1. Voalohany, azafady manomeza antsipiriany momba ny vokatra ilainao hatoninay ho anao.
2. Raha azo ekena ny vidiny ary mila santionany ny mpanjifa, dia manome Performa Invoice ho an'ny mpanjifa handamina ny fandoavam-bola ho an'ny santionany.
3. Raha eken'ny mpanjifa ny santionany ary takianay ny filaminana, dia hanome anay Performa Invoice ho an'ny mpanjifa izahay ary handamina hamokatra indray mandeha rehefa mahazo petra-bola 30%.
4. Handefa ny sarin'ny entana rehetra, ny fonosana, ny antsipiriany ary ny kopia B / L ho an'ny mpanjifa izahay rehefa vita ny entana. Handamina ny fandefasana entana izahay ary hanome B / L tany am-boalohany rehefa mandoa ny mizana ny mpanjifa.
4. Azo atao pirinty amin'ny sary na fonosana ve ny sary famantarana na ny anaran'ny orinasa?
Azo antoka. Ny sary famantarana anao na ny anaranao dia azo atao pirinty amin'ny vokatrao amin'ny alàlan'ny fanisiana tombo-kase, fanontana, embossing, na sticker. Fa ny MOQ kosa dia tsy maintsy mihetsika mihetsiketsika eo ambonin'ny 5000 set; slide miafina ambonin'ny 2000 set; drawer rindrina roa sosona ambonin'ny 1000; lafaoro eo ambony lafaoro mihoatra ny 10000; kabinetra hinges ambonin'ny 10000 pcs sns.
5. Inona ny fe-potoana fandoavanao vola?
Fandoavana <= 1000USD, 100% mialoha. Fandoavana> = 5000USD, 30% T / T mialoha, fandanjalanjana alohan'ny fandefasana entana.
Raha manana fanontaniana hafa ianao, dia aza misalasala mifandray aminay amin'ny mailaka: yangli@yangli-sh.com.
6. Inona no tombony ananantsika?
1. QC henjana:Ho an'ny baiko tsirairay, ny fizahana hentitra dia hataon'ny sampana QC alohan'ny fandefasana. Ny toetra ratsy dia hialana amin'ny varavarana.
2. Fandefasana: Manana departemanta fandefasana entana sy mpandefa izahay, noho izany dia afaka mampanantena fitaterana haingana kokoa izahay ary miaro tsara ny entana.
3. Ny famokarana matihanina ataonay dia manafina sary an-tsary momba ny vatasarihana, sary mihetsiketsika momba ny baolina, sary mihetsika ary latabatra fametahana hatramin'ny 1999.
7. Fa maninona no tsy mandeha amin'ny laoniny ny solosaina famaranana malefaka?
Ny antony mahatonga ny fikorontanan'ny rindrina malefaka dia matetika vokatry ireto zavatra manaraka ireto mandritra ny fametrahana azy, azafady mba diniho arak'ireto fomba manaraka ireto:
(1) Hamarino ny habaka amin'ny lafiny (Fanadiovana).
Jereo aloha ny habaka eo anelanelan'ny kabinetra sy ny vatasarihana dia ao anatin'ny fandeferana. Azafady mba jereo ny torolàlana momba ny habaka (fahazoan-dàlana) mifanaraka amin'ny pejy momba ny fanaka, lakozia ao an-dakozia. Azafady mifandraisa amin'ny mpanamboatra kabinetra raha toa ka 1mm lehibe kokoa noho ny fandeferana voatondro ny haben'ny kabinetra (fahazoan-dàlana).
(2) Diniho ny fanamafisana ny fananganana ny kabinetra sy ny vatasarihana.
Raha ny fandeferana mety amin'ny habaka tena izy (fahazoan-dàlana) dia ao anatin'ny 1mm, azafady araho ny torolàlana momba ny famahana ny olana mba hanaraha-maso ny kabinetra mba hahazoana antoka fa hanangana ny kabinetra ny kabinetra. Ny kabinetra sy ny vatasarihana dia tsy maintsy atao endrika mahitsizoro sy mahitsizoro. Raha tsy mirazotra na miendrika diamondra ny vatasarihana na ny kabinetra dia hisy fiatraikany amin'ny fiasan'ny slide manakatona malefaka.
(3) Hamarino ny fametrahana ny vatasarihana drawer
Mba hamotsorana ny vatasarihana sy ny kabinetra, kitiho ny tabilao famotsorana ireo mpikambana ao anatiny ary esory ny vatasarihana hisintahana. Hamarino tsara fa ny mpikambana afovoany sy ivelany dia mifanila sy manao haavo, ary ny mpikambana ao anatiny dia napetraka mafy manohitra ny tontonana eo aloha ary avo lenta. Ny antsipirian'ny fametrahana ny vatasarihana dia misy fiantraikany amin'ny asan'ny slide. Raha mahafeno ireo fepetra takiana voalaza etsy ambony ireo ny kabinetranao, ary mbola misy ny olana dia aza misalasala mifandray aminay, ary tendren'ny manam-pahaizana manokana hanampy anao
Fa ny kabinetra dia mifanaraka amin'ny takiana etsy ambony fa mbola tsy mandeha tsara, azafady mifandraisa aminay raha mila fanampiana matihanina ianao.
8. Maninona no manosika ny slide misokatra manana elanelam-pivoahana fohy, na tsy mahavita manatanteraka fiasa manokatra?
Ny Push Open Slide dia tsy hiasa tsara raha tsy eo amin'ny fandeferana voafaritra ny habaka (fahazoan-dàlana). Azafady mba jereo ny fampahalalana momba ny vokatra ao amin'ny pejy fanaka Kitchen Kitchen Accessory.
9. Ahoana no hamahako ny tabataba amin'ny slide open open?
Voamarina aloha ny mpikambana afovoany sy ivelany izay apetraka ary apetraka amin'ny rindrin'ny kabinetra. Rehefa tsy napetraka tsara ilay solosaina dia mety vokatry ny fitsabahan'ny mekanisma ilay tabataba, ka hampihena ny halaviran'ny famoahana slide.